الجمهورية التونسية ((ar))
Repoblikan'i Tonizia ((mg))
Teny filamatra : Hurriya, Nidham, ’Adala (Liberté, Ordre, Justice)
Teny ofisialy Arabo an-tsoratra
36°84′N 10°22′E﻿ / ﻿36°84′N 10°22′E﻿ / ﻿37.400; 10.367 Coordinates: latitude minutes >= 60
Anaran'ny mponina Toniziana
IDH (2006) Mihakatra 0,766 (moyen)
Sandam-bola Dinar toniziana (TND)
Faritr'ora UTC +1 (été +2)
Hiram-pirenena Humat Al-Hima
Ny Tonizia (amin'ny fiteny arabo : تونس) na Repoblika Toniziana amin'ny fampiasana ofisialy, dia firenena any afrika avaratra ao amin'ny faritr'i Magreba. Voafaritry ny ranomasina Mediteranea ny Tonizia any avaratra sy any atsinanana. Mizara sisitany amin'ny Aljeria izy any andrefana (965 km ny halava ny sisintany mizara azy amin'ny Aljeria) ary mizara sisintany amin'ny Libia izy any atsimo atsinanana (459 km ny halava ny sisintany mizara azy amin'ny Libia). Ny renivohiny dia Tunis, any avaratra atsinanan'ilay firenena.
Tanimaty ny 40 isan-jaton'ny tany tonizianina, ny 60 isan-jato mijanona dia tany azo ambolena, any Tonizia ankehitriny ny tanindrazan'ny Kartajinianina tamin'ny taonjato faha fito talohan'i Jesoa Kristy hatramin'ny taonjato faha roa talohan'i Jesoa Kristy, alohan'ny nahalasa azy « tanim-barimbazaha » (grenier à blé) an'ny Romana.
Régence de Tunis ny anaran'ny tonizia ankehitriny tamin'ny andron'ny empira Otomana, lasa « protectorat » frantsay ny Tonizia tamin'ny 1881. Teo alohan'ny fahaleovantena (nahazo ny fahaleovantenany tamin'ny 20 Martsa 1956 ny Tonizia), nahazo anarana hoe Fanjakanan'i Tonizia ilay firenena tamin'ny faran'ny fanjakan'i Lamine Bey, tsy nanana satana mpanjaka izany mihintsy. Tamin'ny fiantsoana ny repoblika tamin'ny 25 Jolay 1957, i Habib Bourguiba, leader ny tia-tanindrazana tonizianina, no filoha voalohany indrindra tao Tonizia ; filohan'i Tonizia mandritry ny telopolo taona izy. Tamin'ny faran'ny « fanjakan'i Bourguiba », ny praiministra Zine el-Abidine Bel Ali no nanohy ny tanjon'ny politikan'i Bourguiba, sady manao liberalisation koa eo akaiky eo.